Sei kusarudza PVC ubvise machira?
ne admin pane 21-02-02
Tembiricha yakajairwa, isu tinokurudzira Standard PVC strip machira. Tembiricha yakadzika, isu tinopa Polar PVC strip machira. Mumusangano, tinokurudzira Welding PVC strip machira. Muimba yekuchengetera, tinokurudzira Ribbed PVC strip machira. Kune zvimwe zvakasarudzwa, ndapota nyorera nesu. Zvakajairika Zvishandiso uye Bhenefiti yePVC Strip ...
PVC ndiyo yekutanga-yechinangwa thermoplastic uye ine akasiyana maficha. Parizvino ndiyo yechipiri yakakura mhando yepurasitiki chigadzirwa chechipiri chete kune yakaderera-density polyethylene. Zvigadzirwa zvinogona kukamurwa muzvakaoma zvigadzirwa uye zvakapfava zvigadzirwa: Chikuru kushandiswa kwezvakaoma zvigadzirwa ipombi ...
Chii chinonzi Polyvinyl Chloride (PVC), uye Chii Chainoshandiswa?
Polyvinyl Chloride (PVC) ndeimwe yeanonyanya kushandiswa thermoplastic polymers mupasi (padyo nemapurasitiki mashoma anoshandiswa zvakanyanya sePET nePP). Iyo yakasarudzika chena uye inopwanya chaizvo (isati yawedzera yekuwedzera yeplizizizers) mapurasitiki. PVC yakave yakatenderera kwenguva yakareba kupfuura mapurasitiki mazhinji ha ...